hoo!haa!! – Page 11 –
ABACHA, JI, EDE, ỤKWA
ILU TAA BỤ MAKA ISIRead More →
EKE. Igbo ndi ọma, unu abọọla chi. Ọ bọrọ chi, kelee chi. Taa bụ ụbọchị Eke; Eke Ọka, Eke Ọgbakụ, Eke Ekwuluọbịa, Eke Ụbụlụuku, wdg. Kedu ndi ga-aga ahịa taa? ụmụnwanyị, ụmụnwoke, onye ọbụla nwere ike ịga ahịa. Uru dịkwa ya, ị na-azụ kwa ụbọchị, i nwere ohere inweta iheRead More →
Ilu anyi ta bụ maka Nnụnụ (egbe ,udele ugo) wdg.Ndewo nuRead More →
Ilu taa bụ maka anyaRead More →
ilu taa bụ maka elu/ala Read More →
NKỤRead More →
Otu nwagbọgọbia di afọ iri atọ na itolu, na-alụbeghị di ma jirikwa anya icha ọkụ na-achọ di, ekwuola ka onye pastọ si pịa ya ube itari iri anọ na asatọ ka ya nweta di ga-alụ ya. Adaeze Josephine Ụlọma bụ onye Ọlụ, di na steeti Imo, nọrọ n’ihu igwe ndiRead More →
Xi Xinpeng, Onyeisiala mba Chaịna Ka imechi ụlọ ekpere ndi okpukpere chi nile ka na-aga n’ihu na mba Chaịna, otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji na-achị mba ahụ bụ Communist Party etierela ọchịchị imeobodo ha iwu ka ha machibilata akpụrụakpụ okpukperechi dị iche iche dị n’ama. Iwu a dị ka ndiRead More →
NRI/ERIMERI/ORIRI Read More →
NWOKE INDIA JI NKPỤRỤ EZE ASAA KWỤỌ ỤGWỌ ỌNWA Otu nwoke dị afọ iri abụọ na atọ bụ Ismail Yusuf jiri nkụ-ntu (hammer) kụpụ nna ya ukwu mkpụrụ eze asaa maka na o kweghị akwụ ya ụgwọ ọnwa. Nwokea bụ Ismail kwuru hoohaa, na ya kpara ụdị ikea. Aha onyeRead More →
Otu nwoke dị afọ iri abụọ na atọ bụ Ismail Yusuf jiri nkụ-ntu (hammer) kụpụ nna ya ukwu mkpụrụ eze asaa maka na o kweghị akwụ ya ụgwọ ọnwa. Nwokea bụ Ismail kwuru hoohaa, na ya kpara ụdị ikea. Aha onye akụpụrụ eze asaa n’ọnụ ya bụ Sattish Kasara, ọbụRead More →
Nwa amadị ahụ aka ọrụ ya bụ ikpa ndi mmadụ ụka ọchị bụ Mazị John Okafọ nke eji “Mr Ibu” mara, na nwunye ya bụ Stella Maris mere emume ncheta agbam akwụkwọ ha, afọ nke atọ ya ụnyahụ. Nwunye ya nọrọ n’ọba ozi ‘Instagram’ kele Chukwu maka alum di naRead More →